‘Drogba nasiib ayuu lahaa haddii uusan wajihin isaga’ – Henderson oo Van Dijk ka difaacay weerarkii kaga yimid Ballack – Gool FM
(Liverpool) 26 Maajo 2020. Kabtanka Kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa difaacay Virgil van Dijk kaddib markii hadal weerar ah uu kaga yimid Michael Ballack oo uu dhaleeceeyay daafacan inta ka soo muuqday warbaahinta bulshada.
Laacibkii hore khadka dhexe ee Chelsea ayaa hoos u dhigay qaab ciyaareedka Van Dijk ee Premier League, isagoo ku sababeeyey heerka hoose ee weerarka uu ku wajahay.
Waxaa baraha bulshada lagu soo qoray Ballack oo dhahaya: “Virgil van Dijk aad ayuu u nasiib badan yahay inuusan la ciyaarin hal xiddig oo uusan jirin [Didier] Drogba, [Frank] Lampard, Alan Shearer, [Thierry] Henry, [Wayne] Rooney, [Robin] Van Persie, [Carlos] Tevez, [ Emmanuel] Adebayor iyo Diego Costa horyaalka Premier League, marka layaab ma lahan inay u maleynayaan inuu yahay daafaca ugu fiican horyaalka.”
Tixraacyadaasi waxaa la iskula dhexmaray baraha xiriirka bulshada ee dhinaca Internet-ka, inkastoo ay hadda u muuqato inaysan aaminin qaar ka mid ah Jamaahiirta Reds, arrinta laga sheegay Van Dijk, halka kuwa kooxaha kale taageeraya ay aaminsan yihiin inay tahay arrin dhab ah hadalka ka soo yeeray Ballack.
Haddaba Henderson oo ah kabtanka Liverpool ayaa Instagram-ka ku difaacay xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Van Dijk.
Waxaana Henderson uu soo qoray: “Iyagu waa kuwa nasiibka leh”, inkastoo aan meesha laga saari karin haddii uu ka warqabo in xigashadaasi ay been abuur tahay ama aysan ahayn.